Tena mandeha ve ny sarimiaina amin'ny mailaka? | Martech Zone
Tena mandeha ve ny sarimiaina amin'ny mailaka?
Alarobia, Oktobra 3, 2012 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Meen Boriboune
Manana 30 segondra ianao hisarihana ny sain'ny mpamaky anao raha vao manindry ny mailakao ianao. Azo antoka fa varavarankely kely io. Raha toa ahy ianao dia mety hieritreritra an'izany fanentanana somary mampidi-doza ny mampiasa marketing amin'ny mailaka, fa te hisarika ny sain'ny mpandray anao ianao. Ka inona no ataonao?
Na izany aza, rehefa avy nandalo ny varotra mailaka anay fampandrenesana ny fironana mpanohana, ity dia mety ho fitaovana mahafinaritra ho an'ireo mpivarotra mailaka raha ampidirina am-pahombiazana.
Tsy ny sary mihetsika ihany no fomba mahasarika hisarihana ny sain'ny mpamaky, fa ahafahan'ny mpivarotra misarika ny saina amina vokatra marobe, tolotra na fiantsoana hetsika. Tsy tokony avelanao hisy fiantraikany amin'ny fahafahanao mamonjy izany koa ity sarimiaina ity. Ataovy ho kely ny haben'ny sary mihetsika, tazomy ho an'ny frame 6 fotsiny ny GIF mihetsika, ary alao antoka fa ny fefy voalohany dia mamono ny hafatra (raha misy izany) mba tsy hisy olana amin'ny mailakao tratra ao amin'ny folder Spam.
Raha mila toro-hevitra misimisy momba ny famolavolana sy fandefasana sary mihetsika amin'ny mailakao dia jereo ny Delivra's Sarimiaina amin'ny mailaka: Ahoana ny fomba hampidirana am-pahombiazana an'io fironana farany io.
Tags: AnimationVotoatin'ny mailakamailaka MarketingmpanjifaWhitepaper
Ahoana ny famolavolana Logo
Infographic sy fampisehoana: Ny fivoaran'ny doka nomerika